ST. KITTSAY NEVIS 60 ANDRO FAMPIDERANA INDRINDRA
Ny dingana vita amin'ny famandrihana haingana (AAP) nankatoavin'ny Governemantan'i St. Kitts sy Nevis tamin'ny Oktobra 2016 dia mamela ny fangatahana miaraka amin'ny fandaharan'asan'ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fandaharanasa ho an'ny zom-pirenena amin'ny alalàn'ny fampiasam-bola.
Ny olona liana hampihatra ny AAP dia mbola takiana hanatontosana ireo fepetra takiana rehetra ary hametraka ireo antontan-taratasy ilaina ilazana mba hampiharana ny maha olompirenena amin'ny fampiasam-bola.
Homena fitsaboana haingana ny zom-pirenen'ny vondron'ny olom-pirenena, ny Mpanome Fahavitrihana noho ny fahazotoana sy ny biraon'ny St. Kitts ary ny Office Nevis Passport. Amin'ny maha-bonus dia misy koa ny fampiharana sy ny fanodinana ny St. Christopher (St Kitts) sy ny pasipaoron'i Nevis.
Ny fampiharana amin'ny AAP dia afaka mahita fampiharana iray vita ao anatin'ny 60 andro miaraka amin'ireo rindranasa vitsivitsy vita raha vao 45 andro.
Ny fandoavam-bola amin'ny AAP (anisan'izany ny vidin'ny fahavononany mendrika)
Mpangataka Mainty: 25,000.00 XNUMX dolara amerikana
Miantehitra mihoatra ny 16 taona: 20,000.00 dolara amerikana
Ho fanampin'ny US $ 25,000.00 sy $ 20,000.00 dolara amin'ny famatsiam-bola amerikana AAP, ny sarany fanampiny amin'ny US $ 500.00 isaky ny olona dia azo ampiharina amin'ny fanodinana ny St. Kitts sy ny Nevis Passport ho an'ireo izay miankina amin'ny 16 taona.
Aza misalasala mifampiresaka amin'ny ekipa mpampiasa ny zom-pirenen'ny Vondron'olona mizaka vola ho an'ny fanontaniana rehetra momba ny fizotran'ny fampiharana haingana.
Noho ny fotoana fihodinan'ny andaniny fahatelo an'ny mpangataka mandray anjara avy amin'ireo firenena manaraka ireto dia tsy azo ekena amin'ny AAP:
Repoblika federaly any Nizeria,